Kooxda ISIL oo dagaal adag ugu jirta difaacashada magaalada Mosul – The Voice of Northeastern Kenya
Kooxda ISIL oo dagaal adag ugu jirta difaacashada magaalada Mosul
Dagaalyahannada kooxda isku magacowday Khilaafada Islaamka eek u sugan dalka Ciraaq ayaa lagu soo waramayaa in ay iska cabin xoogan kala hor tageen ciidamada dowladda Ciraaq iyo xulafadooda ee damacsan in ay la wareegaan magaalada Muhiimka ah ee Mosul.
Xoogaga dowladda Ciraaq ayaa sameeyay jiid dagaal oo 3-aad, taasoo ay sare ugu qaadeen dagaalka ay ku doonayaan in ay kooxda Daacish uga fara maroojiyaan magaalada Mosul.
hase ahaatee caqabadaha ugu waaweyn ee ay ciidanka dowladda Ciraaq la kulmayaan ayaa ah gawaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay oo ay kaxeynayaan dagaalyahanno naftood hureyaal ah oo ka tirsan kooxda ISIL.
Mosul oo ah magaalada 2-aad ee ugu weyn dalka Ciraaq ayaa tan iyo sanadkii 2014-ki ku jirta gacanta kooxga ISIL, iyagoo halkaasna kasoo abaabula weerarada laga fuliyo qeybaha kala duwan ee wadankaasi.
Magaaladaan oo ay dhaqaale ballaaran oo ay howlohooda ku fuliyaan ka helaan kooxda ISIL ayaa ah fariisinkooda ugu weyn ee ay uga suganyihiin wadanka Ciraaq.
Daacish ayaa horay looga qabsaday magaalooyinka istiraatiijiga ah eek ala ah Ramadi iyo Faluja oo ka wada tirsan gobolka Ambaar ee galbeedka dalka Ciraaq.
← Booliska Kisumu oo lagu amaanay dagaalka ka dhanka ah burcadda
Dowladda oo la filayo in ay lacag 2 billion ah u adeegsado wax ka qabashada abaaraha →